Author Topic: Sushma Karki - model and actress (Read 173943 times)
« Reply #20 on: June 03, 2012, 01:13:03 PM »
« Reply #21 on: June 03, 2012, 01:13:16 PM »
« Reply #22 on: June 03, 2012, 01:13:24 PM »
« Reply #23 on: June 04, 2012, 09:07:24 PM »
बैंशको उन्मादमा सुष्माले के के देखाईन् ?
चलचित्र ‘जिन्दगानी दर्पणछायाँ’का निर्माता रोहित पुरीलाई पत्रकारको एउटा प्रश्नले खुवै सतायो । त्यो थियो, यो सिनेमा ‘जिन्दगानी’ र ‘दर्पणछायाँ’को संगम त होईन ? यो प्रश्नको जवाफ दिँदादिँदै हैरानी भोगे उनले ।
काठमाडौंमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा रोहितलाई यो प्रश्नले हैरान पार्यो । उनले दुईवटा चलचित्र भन्दा भिन्न प्रकृतिको सिनेमा भएको बताए । यसभन्दा अघि जिन्दगानी र दर्पणछायाँ नाम गरेका दुई सुपरहिट सिनेमा बनिसकेका छन् । हिट यि दुईवटा नामलाई मिलाएर तयार पारिएको यो सिनेमाले पनि राम्रो व्यापार गर्ने निर्माणपक्षको विश्वास रहेको छ ।
सुनिल मानन्धरको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा कलाकारको भने उपस्थिति थिएन । जेठको २६ गते काठमाडौंभित्र र असार ८ गतेबाट मोफसलका हलमा रिलिजको तयारीमा रहेको यो सिनेमाको बारेमा पत्रकारलाई जानकारी दिन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । मनिष पन्थको लेखन तथा निर्देशनमा तयार भएको यो सिनेमामा दिलीप रायमाझी, नन्दिता के.सी.को मुख्य भूमिका रहेको छ ।
‘चलचित्रभित्र कुनै अश्लिल दृश्य छैनन्, सबै परिवार नै मिलेर सिनेमा हेर्न सकिन्छ’ निर्देशक मनिष पन्थले भने । यो सिनेमाको एउटा गीत नारायणहिटी संग्रालयमा पनि छायांकन गरिएको छ । सम्भवतः यो अहिलेसम्मका लागि नारायणहिटीमा छायांकन गरिएको पहिलो सिनेमा नै हो ।
चलचित्रभित्र एउटा आईटम गीत पनि छ । जसमा नायिका सुष्मा कार्कीले कामुक नृत्य गरेकी छिन् । पछिल्लो समयमा नायिका भन्दा पनि आईटम गीतमा आफ्नो छवी बनाएकी सुष्माको यो आईटम गीतलाई राष्ट्रिय संचारमाध्यमले प्रतिवन्ध पनि लगाएका छन् ।
« Reply #24 on: June 04, 2012, 09:08:13 PM »
« Reply #25 on: June 04, 2012, 10:00:02 PM »
Quote from: sanjayat on May 09, 2012, 10:41:44 AM
Yo yeti yeti gangai rani ko banned video koi sanga xaina? xa vaney upload garam na ho sathi vai haru...!!!!11
« Reply #26 on: June 04, 2012, 10:12:48 PM »
सुष्मा नाङ्गिंदा प्रोडक्शन कन्ट्रोलर वेहोस
नायिका सुष्मा कार्कीको हट सिन हेरिरहेका चलचित्र विन्दासका प्रोडक्शन कन्ट्रोलर हरि कार्की वेहोस नै भएको खवर छ । चलचित्र विन्दासमा नायिका कार्कीको हट वेड सिन हेरिरहेका कार्की हेर्दा हेर्दै ढलेका थिए ।
निर्देशक राजु गिरीका अनुसार, उनी वेहोस भएको कारण तत्काल नखुलेपनि पछि उनले आफुले सुष्मालाई हेर्दा हेर्दै वेहोस भएको वताए । ३ लाख पारिश्रमिक दिएका कारण कथाले मागे अनुसारको दृश्य आफुले खिच्ने वताएका निर्देशक गिरीले यो सिनेमामा नायिका कार्कीको जवानीलाई मज्जैले पर्दामा उतारेका छन् ।
मधुकुमार श्रेष्ठको निर्माणमा तयार भएको यो सिनेमामा नायिका कार्कीको जवानी स्वीमिङ पुलदेखि वेड रुमसम्म देख्न सकिन्छ । चलचित्रमा सुष्माको साथमा अशोक फुयाँल, सुशान्त कार्की र रोशिन घिमिरेले पनि अभिनय गरेका छन् ।
भदौ ८ गतेका लागि रिलिज डेट तय गरेको विन्दास सिनेमा सेक्स र प्रेममा आधारित छ ।
« Reply #27 on: June 04, 2012, 10:13:38 PM »
« Reply #28 on: June 05, 2012, 08:19:38 PM »
Quote from: fifafifa on June 05, 2012, 02:51:34 PM
which song of suahma karki was banned ?? does that song is on youtube? if not someone plz post it
Quote from: tundikhel on June 04, 2012, 09:08:13 PM
« Reply #29 on: June 16, 2012, 01:11:07 AM »
एटिएम काण्ड सेलाउन नपाउँदै बिन्दास काण्डले फेरि फिल्मी बजार तताउने लक्षण देखिएको छ । हाल छायाँकन र सम्पादन एकसाथ भईरहेको फिल्म बिन्दासको यस्तो फस्टलुक सार्वजनिक गरिएको छ कि त्यो फस्टलुकले एक पटक नायिका शुष्मा कार्कीलाई आलोचित नबलाउला भन्न सकिन्न ।
मध्यरातको करिब १ बजे तिर नायिका कार्कीको बक्षस्थललाई नै हाईलाईट गरेर फिल्म बिन्दासको फस्टलुक फेसबुकमा देख्न पाईयो । पोस्टरमा शुष्माले दिएको पोजले नै बोल्नु पर्ने सबै कुरा बोलीसकेको छ । भनिन्छ नि तस्विर आफै बोल्छ । हुनत केहि दिन अगाडी मात्र सुष्माले फिल्मीखबरसंगको कुराकानीमा बिन्दासमा आफू बिन्दास भएर काम गरेको बताएकी थिईन्। उनले कस्तो काम गरेकी होलिन् त ? अनुमान तपाईं आफै लगाउनुस् ।
मधुकुमार श्रेष्ठको प्रस्तुतीमा राजु केसीले निर्माण गरेको फिल्मलाई राजु गिरीले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्ममा शुष्माको साथमा अशोक फुयाल र सुशान्त कार्की मुख्य भुमिकामा छन् । भाद्र ८ गते रिलिज हुने बताईएको सो फिल्मले आधुनिक युवायुवतीको जीवनकथालाई चित्रण गर्ने बताईएको छ ।